Soo Iibso Biyo-Xidheenka U Ad-adkaysta Qashinka Nadiifinta Dabiiciga ah Beeswax - Rar Bilaash ah & Cashuur La'aan | WoopShop®
Biyo-Xireenka Biyaha-dabiiciga ah ee Beeswax
maraakiibta From Shiinaha Russian Federation Spain United States France
Nooca udugga Beeswax Beeswax oo leh 2 maro Beeswax oo leh isbuunyo
Shiinaha / Beeswax Ruushka / Beeswax Spain / Beeswax Mareykanka / Beeswax France / Beeswax Shiinaha / Beeswax oo leh 2 maro Ruushka / Beeswax oo leh 2 maro Spain / Beeswax oo leh 2 maro Mareykanka / Beeswax oo leh 2 maro France / Beeswax oo leh 2 maro Shiinaha / Beeswax oo leh isbuunyo Ruushka / Beeswax oo leh isbuunyo Spain / Beeswax oo leh isbuunyo Mareykanka / Beeswax oo leh isbuunyo France / Beeswax oo leh isbuunyo
Xiro-u adkaysiga u Xidhnaanta Biyo-Xidhnaanta Dabiiciga Beeswax - Shiinaha / Beeswax gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Foomka Shayga: Gel
Tilmaamid / Goyn: kale
Alaabtu waxay u baahan yihiin in laga ilaaliyo iftiinka, heerkulka kaydinta 15 ilaa 25 darajo ayaa ka fiican.
Isbedelada heerkulka dibedda wuxuu sababi karaa isbeddello jilicsan laakiin ma saameyn ku yeeshaan wax soo saarka iyo isticmaalka.
Bee Waxbase kaliya, waxyaabaha kale ee lagu muujiyo sawirka kuma jiraan.
Shayga waa beeswax dabiici ah oo ay qariyey beeswax, sifiican loo nadiifiyey oo la sifeeyay.
Caabudinta ku saleysan beeswax waxaa si gaar ah loogu sameeyay warshadda qoryaha.
Sheygu wuxuu ka dhigaa qoryaha mid aad u qurux badan, wuxuu xardhay alwaaxda wuxuuna abuuraa lakab difaac u leh uumiga.
Alwaaxda wax dhuuqda waxay muujisaa fiiber iyo dhejis, waxay u egtahay mid wanaagsan oo laga ilaaliyo qoyaan.
Waxaa loo adeegsaday farshaxanimada, alaabta guriga, sagxadda dhulka, dhagxan daabacan, jijimooyin qoryo, iwm.
Alaabtaani waxay gacan ka geysan kartaa kor u qaadida maqaarka, qoyaanka, iyo ka hortagga burburka dusha sare ee alwaaxa.
Fiiro gaar ah: farqiga u dhexeeya kormeerayaasha kaladuwan, sawirku waxaa laga yaabaa inuusan ka tarjumin midabka dhabta ah ee shayga. Waxaan dammaanad qaadeynaa in qaabku la mid yahay sida lagu muujiyey sawirada, laakiin aan la mid aheyn waxqabadka isku mid ah ee ka dhaca qeybaha kala duwan sida moodeelka. Xidhmada ka mid ahaa:
Ama Beewax * 1 + maro * 2
Ama Beewax * 1 + isbuunyo * 1